Ndị na-arụpụta ihe na ndị na-edozi uhie, lierslọ ọrụ - China
SYGL ụdị ahụ jijiji iyo
Ihe eji eme ihe a maka mmiri mmiri na mmiri na-ekpo ọkụ ma ọ bụ mmiri mmiri ọkụ, nke a kapịrị ọnụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na achọtara nzaghachi dị iche site na mita abụọ, mee ka ọtụtụ okirikiri gbanwee, mgbe ahụ enwere ike iwepu mmetọ mgbe valvụ mepere emepe, ọ nweghị Achọrọ kesaa akụkụ ọ bụla. 1.Nrụ ọrụ nrụgide: 1.6MPa 2.Medium: mmiri 3.Shell: nkedo nkedo 4. Ihuenyo nyocha: 304 Size LH 50 240 160 65 270 180 80 300 200 100 350 230 125 3 ...
Nkwalite ngwaahịa Nkọwa ụdị ejiri nke ejiri na pipeline maka mmanụ ma ọ bụ mmiri mmiri mmiri mmiri ọzọ, ewepu sundries dị n'ime ọkpọkọ, mpaghara ngebichi nke nza a bụ 2.5-3.3 karịa ibu karịa mpaghara mmiri, ọ gaferelarị ụdị Y na T . Filtration nkenke bụ ihe kasị mma n'etiti ndị nzacha. Ihuenyo na-aba uru karịa nzacha ọzọ, na mma maka ojiji. Principlekpụrụ ọrụ Somefọdụ sundries ga-eweta ...
7901 Grooved Ends Y-ụdị Strainer
Nkọwa NPT ma ọ bụ BSPT blowoff tinyekwa na mkpuchi. A na-ejizi plọg agwụchaa ndị na-ere ahịa Blowoff. Ihu na-perforated 304 igwe anaghị agba nchara na ntụpọ welded onuete. Nọdụ ala n'ime ahụ na-eme ka nhazi ihuenyo ziri ezi. Akụkụ dị iche iche na-agbaso ọkọlọtọ Metric ma ọ bụ AWWA C606. Nrụgide ọrụ na ọkụ 16 mmanya / 250 psi gosiri na -10 Celsius C na 120 Celsius. Mkpuchi Corrosion Protection Fusion bonded mkpuchi ma ọ bụ mmiri mmiri epoxy ese ime na mputa. ...
7701 Threaded nsọtụ Y-ụdị Strainer
Ihe NPT ma ọ bụ BSPT na-ekpuchi mkpuchi. A na-ejizi plọg agwụchaa ndị na-ere ahịa Blowoff. Ihu na-perforated 304 igwe anaghị agba nchara na ntụpọ welded onuete. Nọdụ ala n'ime ahụ na-eme ka nhazi ihuenyo ziri ezi. NPT ma ọ bụ Metric eri mechie. Nrụgide ọrụ na ọkụ 25 mmanya / 300 psi gosiri na -10 Celsius C na 120 Celsius. Mkpuchi Corrosion Protection Fusion bonded mkpuchi ma ọ bụ mmiri mmiri epoxy ese ime na mputa. Ihe nkọwa Isi ca ...
7103 Y-ụdị Strainer
Detuo mpempe mmiri BSPT na mkpuchi. A na-ejizi plọg agwụchaa ndị na-ere ahịa Blowoff. Ihu na-perforated 304 igwe anaghị agba nchara na ntụpọ welded onuete. Nọdụ ala n'ime ahụ na-eme ka nhazi ihuenyo ziri ezi. Flanged na mkpọpu ala kwekọrọ na EN1092-2 PN16 / 25. Ihu na ihu akụkụ dịka DIN3202 usoro F1. Nrụgide ọrụ na ọkụ 16 mmanya akara na -10 Celsius C na 120 Celsius C maka DN50 na DN600. Ogwe 25 gosipụtara na -10 Celsius C na 120 Celsius C maka DN50 na DN300. Corrosi ...
7101 Y-ụdị Strainer
Nkọwa NPT ma ọ bụ BSPT blowoff tinyekwa na mkpuchi. A na-ejizi plọg agwụchaa ndị na-ere ahịa Blowoff. Ihu na-perforated 304 igwe anaghị steewith ntụpọ welded onuete. Nọdụ ala n'ime ahụ na-eme ka nhazi ihuenyo ziri ezi. Flanged na mkpọpu ala kwekọrọ na EN1092-2 PN16 / 25; ANSI B 16.1 Klas125. WRAS kwadoro: FIG.7101 DN50-DN600 DI ahụ, EPDM gasket maka mmiri ọableụ .ụ. Nrụgide ọrụ na ọnọdụ okpomọkụ FIG.7101: Ogwe 16/200 psi gosiri na -10 Celsius C na 120 Celsius C maka DN50 na DN600. ...
GLSY-16 ụdị sere mkpanaka companding iyo
Nkọwapụta nkọwapụta Ihe mwube nke GLSY- ụdị 16 esiri mkpanaka na-etinye ihe ntanetị dịka GL (y) ụdị nyo, gbakwunye otu setịpụrụ ngwakọta njikọta ọzọ, tiori na-ewepu nsị dịka GL (y) ụdị nyo, ọ dị mma maka echichi Ihe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ (DN) 50 65 80 100 125 150 200 200 250 300 300 300 300 400 450 500 550 650 775 900 H 130 165 195 230 300 335 420 500 580
GL (Y) -16 ụdị nzacha
Ntinye ederede GL (Y) ụdị nhicha eji maka mmiri, mmanụ, pipeline gas na ụdị akụrụngwa, ọ kachasị ewepu sundries dị n'ime nke pipeline iji chebe valvụ enyemaka, valvụ ntọhapụ, mmiri, valvụ na mgbapụta wdg. na-ejikarị enyocha maka mmiri ojiji ịmụta 10 ~ 30 oghere / c m2, ihuenyo maka gas ojiji ịmụta 40-100 oghere / c m2, ihuenyo maka mmanụ ojiji ịmụta 60- -200 oghere / cm2. Nka na ụzụ teknụzụ 1. Nrụ ọrụ: 1 .6MPa 2.Teat preci ...
Principlekpụrụ ọrụ A ga-eweta ụfọdụ sundries n'ime pipeline mgbe echichi, sundries nwekwara n'ime akụrụngwa mgbe ị na-emepụta, mgbe mmiri mmiri na-asọ site na nzacha, mmetọ niile ga-agbakọta na nyocha naanị oghere mkpuchi ma kpochaa ihuenyo dị mma. Ekwu banyere: ihuenyo ihuenyo nke T ụdị nyo bụ kasị nta n'etiti nzacha, na ọ bụ ihe kasị sie ike igbapu nyo. Nka na ụzụ Teknụzụ 1. Nrụ ọrụ: 1.6 ~ 4.0MPa 2. Ọkara: mmiri, gas nkịtị 3. Sh ...
Ugboro abụọ Ekwuru Okwu Butterfly Valve, Nkedo Steel Ugboro abụọ Eccentric Butterfly Valve,